Brezila: Hetsika Mitaky Zo Hahazo Kianja Tsy andoavam-bola Mandritra ny Fetibe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Janoary 2012 12:34 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Español, 日本語, Português, English
Nisy fihetsiketsehana nentina nanoherana ny fivarotana ho an'olo-tsotra ny tanim-panjakana tamin'ny 14 Janoary ho fiomanana amin'ny Fetiben'i Salvador (Carnaval de Salvador), iray amin'ny fety an-dalambe lehibe indrindra manerantany, izay hanomboka ny 18 Febroary. Hafatra mivandravandra ho an'ny Ben'ny Tanànan'i Cité de Salvador, ao amin'ny fanjakana federalin'i Bahia, João Henrique sy ho an'ny orinasa Premium hampitsahatra ny fanitarana lavarangana (tohatra) ampiasaina mandritra ny Fetibe ny fihetsiketsehana. Ireny foto-drafitrasa izay fantatra amin'ny anarana hoe ‘camarote’ ao amin'ny firenena ireny, dia maka velarana midadasika amin'ny tanim-panjakana eo amin'ny arabe lehibe indrindra ao amin'ny faritr'i Ondina; tao no nanaovana ny fihetsiketseham-panoherana.
Araka ny Blog da Ilha (Bolongan'ny Nosy) [pt], na dia an'ny fitondrana federaly aza ny toerana, Ny Lapan'ny Tanàna no nanome alalana ny orinasa tsy miankina Premium hanangana ‘camarote’ iray, ny ‘Camarote Salvador’. Efa nampandoa vola R$ 374 000 (U$ 210 000) ny Departemanta Federalin'ny Petrabola (SPU amin'ny teny Portiogey) saingy antenaina mbola antenaina hitsangana ihany ny ‘Camarote Salvador’. Nitatitra ihany koa ny Blog da Ilha fa handoa sara R$ 490,00 (U$ 272) ka hatramin'ny R$ 990,00 (U$550) ny tsirairay ahafahana miditra malala mandritra ny tontolo andro ao amin'ny ‘Camarote Salvador’ ary mety ho tafakatra hatramin'ny R$ 4.890,00 (U$ 2.720) ahafahana miditra malalaka mandritra ny Fetibe [Karnavalina] iray manontolo.
Olona te-hifety an-dalambe mandritra ny Karnavalin i Salvador tsy mandoa vola teren'ny camarotes andaniny sy ny "carnival blocos" mandoa vola ankilany. Saripika faritra Ondina, Fetibe 2010, namoaka i Rodrigo Sá hita ao @ Flickr (CC BY 2.0)
Tsy mandeha tsitokatokana hanaovana lohahevitra ny fananganana ny ‘camarote’ manaraka ny lalambato. Maneritery ny zon'ny tsirairay hankafy maimaipoana ny lanonana eny an-dalambe ny fielezan'ny fandraharahana momba ny Carnival ‘blocos’ (“tribunes”) . Manangana tarika hilalao ambonin'ny trio elétricos (kamiao mitondra fanamafisam-peo) sy karazana fanamiana (abadá)ho an'ny olona ny Carnival ‘blocos’ andoavam-bola. Ho fampisarahana ny mpanjifa amin'ny tsy mpanjifa dia mametraka mpiambina mitazona tady manodidina ny trio elétricos sy izay nividy fanamiana ry zareo. Rehefa milalao manerana ny arabe ny tarika dia teren'ny ‘camarotes’ sy ny ‘blocos’ an'olo-tsotra izay tsy mandoa vola.
Fetibe ho an'ny rehetra
"Fitondrana tsy mahay, Fiarahamonina mitsontsorika. Mihetseha. Miaraha aminay." Saripika Clarissa Pacheco hita ao @ Flickr (CC BY 2.0)
Nanomboka taty amin'ny aterineto ny hetsika. Nisy vondrona nitsangana tao amin'ny Twitter (@OcupaSalvador) sy ny Facebook (Ocupa Salvador) mikendry ny hitaky kianja malalaka ho an'ny olona hifety malalaka (tsy mandoa vola) mandritra ny Fetibe, mampiseho fa nahazo ny taratra avy amin'ny Hetsika Bodoy manerantany ry zareo.
Na dia namoaka didy fandrarana vonjimaika ny hetsika eny an-toerana aza ny mpitsara ao amin'ny Efitra fahafiton'ny Fitsarana ara-Tahirimbola, Lisbete Maria, dia nidina an-dalambe ihany ny olona tamin'ny 14 janoary. Nampiasaina ny tambajotra sosialy hamelombelona ny hetsika mba ahafahan'ny olona avy ao Salvador mitaky ny zony mba tsy ho ny tombombarotra no asandratra fa hifantoka kokoa amin'ny olona.
Namoaka andian-tsary sy hafatra [pt] tao amin'ny Twitter, izay manome endrika ny antsoina hoe ‘hetsika ho fanoherana ny fanidiana ny kianjan'i Ondina izay nampanofaina ho ana kitohatra (gradins) tsy miankina’ ny Sojabe teo aloha tao amin'ny Anjerimanontolon'i Bahia Naomar Almeida Filho (@naomar_almeida):
‘DESOCUPA’ dia hetsika tselatra nifampiantsoana tao amin'ny tambajotra sosialy. Nahazo olona 1000 tao Ondina tanatina tolakandro avy orana. Zara raha nitatitra ny gazety.
"Kianja an i vahoaka / ny lanitra an i condor (voromahery) / Eto ny fijerena ny fahafahana/ mamorona voromahery ao an-kibony" Castro Alves. Saripika @naomar_almeida hita ao @ Twitpic.
André Lemos (@andrelemos), mpampianatra miara-miasa ao amin'ny Anjerimanontolo federaly ao Bahia sady manampahaizana manokana momba ny kolontsaina an-tserasera, no ni-tweet [pt]:
Ny Fiara miala amin'ny lalana; sehatra an'olo-tsotra miala amin'ny torapasika; mozika mavesatra miala amin'ny tontolo iainana; herisetra miala amin'ny fanahy maro – #desocupa salvador
Ao amin'ny Youtube no misy lahatsary ahitana olona avy amin'ny sokajin-taona rehetra miteny ny heviny amin'ny fandraisam-peon'ny kominina ary mitabataba ny voambolana “Desocupa” (Miala):
Fitsofohana na eo aza ny fahasamihafana
"Anao ny arabe, "negão"! Camarote Tsia". Saripika Clarissa Pacheco hita ao @ Flickr (CC BY 2.0)
Taloha, somary mihoatra noho ny antoko demokraty ahitana ny hafa kokoa ny Fetiben'i Salvador, fotoana ifangaroan'ny olona avy amin'ny saranga sy kolontsaina samihafa eo amin'ny kianjam-bahoaka iraisana. Saingy tao anatin'ny taompolo roa farany dia niova ny toe-draharaha tamin'ny fisin'ny ‘camarotes’ sy ny Fetiben'ny “isaky ny arabe” andoavam-bola.
Ankilan'ny tombombarotra, dia ampiasaina ho fandresen-dahatra mafonja koa indraindray ny antony iray hanaovana ny Fetiben'i Salvador hokarakarain'olo-tsotra: filaminana [fiarovana].
Araka ny antontan'isa navoakan'ny Fivondronam-pirenen'ny monisipalite (CNN, amin'ny teny Portiogey), ny tanànan'i Salvador no manana ny taha ambony indrindra amin'ny fahafatesana vokatry ny tifi-basy tany Brezila tanelanelan'ny taona 1998 sy ny taona 2008, notaterin'ny vohikalan'ny Rádio Metrópole [pt].
Mandritra ny Fetibe dia mampihena ny kianja malalaka tsy andoavam-bola ny firoboroboan'ny ‘camarotes’ manaraka ny lalana, izay mampisy elanelany bebe kokoa eo amin'ny manankarena sy ny mahantra, ary mety hiteraka adin-tsaranga aza. Tsy misy famirapiratana velively ny momba azy ity ao amin'ny Wikitravel ao amin'ny fizarana hoe Stay Safe : “Noho ny elanelan-tsaranga midangana, malaza noho ny heloka an-dalambe i Salvador”.
"Miala tsiny noho ny fanelingelenana, Miasa izay hahatsara kokoa an'izao tontolo izao!" Saripika Clarissa Pacheco hita ao @ Flickr (CC BY 2.0)
Ao amin'ny Facebook ny mpisera Ernesto Diniz no mijery fa nampifamatotra ny fiaraha-monina ny Fetibe [Karnavalina] [pt]:
Noho ny fizahantany tsy mahalala menatra manavakavaka sy lasa atao orinasa dia voaroba sy tsy afa-mihetsika isan-taona ny tanàna ka tsy afa-mandalo intsony ny Fetibe. Efa nanjavona hatry ny ela ny fiavahany ary tsy dia misy inona loatra sisa tavela tamin'ny antony nanaovana ny fetibe hampifanerasera ny olona na dia eo aza ny fahasamihafana.